Iincwadi ezi-6 zolutsha ezigqibeleleyo zokufunda ngentwasahlobo, phakathi kweyona | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezi-6 zolutsha ezigqibeleleyo zokufunda ngentwasahlobo
UJuan Ortiz | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Ezahlukeneyo
Iincwadi ezi-6 zolutsha ezigqibeleleyo zokufunda ngentwasahlobo.
Ukufunda, ngaphandle kwamathandabuzo, ngumkhwa osempilweni oququzelela ukukhula kwengqondo kwabo banako ngomkhwa. Esi senzo sikuvumela ukuba ufunde nangaso nasiphi na isifundo naphi na, ufuna nje ukukhanya okuncinci, ixesha kunye nomnqweno wokujonga ukuba yintoni umbhali athe wagqiba ekubeni ayibambe kumaphepha omsebenzi wakhe.
Ukukhuthaza abantu abatsha ukuba bazikise ekufundeni kukubanika isitshixo esinokuvula iingcango ezingenakubalwa, njengokuba uninzi lweengcinga namandla okudala omntu lufikelela; ngenene, ibaxhobisa, ibabonelela ngesixhobo esiza kuthatha isigqibo ekwakhiweni kwabo kwengqondo kunye noluntu. Eli nqaku libonisa ezintandathu iincwadi ezinkulu nawuphi na umfana okanye intombazana uhambahamba kwilizwe elinomdla nelifunekayo loncwadi.
1 Ibali elingenasiphelo (Ingqokelela yeAlfaguara Classics)
1.1 Iimpawu zencwadi
2 I-Midnight Bird (Abafundi Abaselula)
2.1 Iimpawu zencwadi
3 Umntu uyaxoka (Akukho mida)
3.1 Iimpawu zencwadi
4 Wonder-Isifundo sika-Agasti (INK ILWIMI)
4.1 Iimpawu zencwadi
5 IZiko (LIPHUMELELE)
5.1 Iimpawu zencwadi
6 Iikhayithi esibhakabhakeni (Inoveli yemifanekiso)
6.1 Iimpawu zencwadi
Ibali elingenasiphelo (Ingqokelela yeClassic Alfaguara)
Ukuba sithetha ngezinto zakudala kuncwadi lwamva nje, Ibali elingenasiphelo , ngokungathandabuzekiyo, ngumsebenzi ongenakubekelwa bucala. UMichael Ende, umbhali wayo, wayeyazi indlela yokunika ubomi kumlinganiswa ngamnye kwilizwe laseFantasia ngocoselelo, ngelixa wayeluka iqhinga elinomtsalane nelinomtsalane elinokubambisa abo bajongana nalo okokuqala, kwaye oko kubiza umzuzu ngamnye ukuba abo sele beyifundile. Ayilolize ukuba esi sihloko siphakathi ezona ncwadi zibalaseleyo zamaphupha
Uqweqwe oluqinileyo: Amaphepha ayi-496
Kucetyiswa ubudala: iminyaka esithoba nangaphezulu
Ushicilelo: 001 (ngoMeyi 20, 2016)
Ingqokelela: Ingqokelela yeClassic Alfaguara
Ungayithenga le ncwadi apha: Ibali elingenasiphelo
Ubusuku beentaka (Abafundi abaselula)
Kubathandi bobunyani bobunyani, uAlice Hoffman usizisa Ubusuku beentaka, incwadi emele ukhetho olungenakubekelwa bucala. Phakathi kokuvela kwesilwanyana esingaqondakaliyo esinamaphiko, iziqalekiso ezizukulwana, amagqwirha, amasiko angavumiyo ukufa kunye neendawo zokuphupha, iyelenqe liyaqhubeka. Yiza udibane neTwig Fowler kunye nosapho kwaye yintoni edibanisa nezi zinto zingaqhelekanga; Ukufunda iphepha lokuqala kukufuna ukufikelela esiphelweni ngaphandle kokuma umzuzwana.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-200
Ushicilelo: 001 (Matshi 23, 2017)
Ingqokelela: Abafundi abaselula
Ungayithenga le ncwadi apha: Ubusuku beentaka
Umntu uyaxoka (Unlimited)
Itekhnoloji ifike ngokungena nzulu kule mihla yethu, mhlawumbi kakhulu kunambitheka kwabaninzi. Le ncwadi isibonisa indlela i-app elula yenethiwekhi yoluntu enokubutshintsha ngokupheleleyo ubomi babantu abancinci beZiko laseBayview emva kokubhengeza iimfihlo ezimnyama zabaninzi, ekhokelela ekubulaweni kukaSimon Kelleher, umyili wesoftware.
Indima yomfundi iya kuba kukufumanisa ukuba ngubani, phakathi kwako konke, yayingumbulali nyani kwaye yintoni eyamkhuthazayo ukuba aqhubeke nolwaphulo-mthetho. Ngaphandle kwamathandabuzo, kufundwe ngokungummangaliso kweli hlobo. UKaren M. McManus, umbhali wayo, usizisele iyelenqe elinomdla kakhulu eliya kwenza ukuba ngaphezulu kwesinye sicinge ngendlela esibhenceke ngayo kwimidiya yedijithali.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-352
Ushicilelo: 001 (Septemba 13, 2018)
Ungayithenga le ncwadi apha: Umntu uyaxoka
Wonder-Isifundo sika-Agasti (INK amafu)
Wonder: Isifundo sika-Agasti.
Ubomi bunzima, masingabuphiki. Nokuba sizalelwaphi, okanye sikwasiphi isikhundla ekuhlaleni, ubomi buya kuhlala bunamaqhuma. Nangona kunjalo, kukho abantu ababethwe kakhulu kunabanye, abantu abathi, ngenxa yesizathu esithile sokudalelwa, abaze emhlabeni benempawu zomzimba eziqhelekileyo kubo bonke abanye abantu. Kwaye, masicace gca, ukuba kukho into abantu abangayiqondiyo, yiyo eyahlukileyo, yahlukile.
En Isimanga- isifundo sika-Agasti, U-RJ Palacio (umbhali wayo) usibonisa ibali lenkwenkwe eza emhlabeni inesiphene ebusweni kunye nendlela ekufuneka oyise ngayo imihla ngemihla ejongene nokugculelwa kwabo afunda nabo kwaye abonakalise, ngenkalipho kunye nokuzimisela, ukuba ufanelwe yintlonipho kwaye unokuhlala kwindawo enesidima eluntwini, njengaye nawuphi na umntu.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-416
umhleli: I-Ink yefu
Ushicilelo: 001 (Septemba 13, 2012)
Ingqokelela: I-Ink yefu
Ungayithenga le ncwadi apha: Wonder-Isifundo sika-Agasti
Kubathandi aboyikisayo kukho eli bali litsha livela kwinkosi eyoyikisayo uStephen King. Yintoni onokuyilindela kuKumkani, ewe, eyona ilungileyo. Lo msebenzi usisa kwiindawo "zeli ziko", indawo engendawo elawula "ukugaya abantwana abaneengqondo ezithandekayo." Apho uthathwa (emva kokuba ebanjiwe) uLuka Ellis, owayeneminyaka elishumi elinambini wabulala nje abazali bakhe.
Ukufika kwakhe kwiziko, uLuka udibana namanye amakhwenkwe, kodwa banegunya elikhethekileyo. Kancinci kancinci eli yelenqe liya libamnyama emva kokuveza impatho-mbi apho abantu abatsha "baphathwa khona" benziwa khona. Emva kothotho lokulahleka, u-Ellis ufuna ukubaleka, kodwa ngaphandle kweziphumo, kuba akukho mntu ubalekileyo kwiZiko. Ukuba uyafunda Ngu, ke uya kuyithanda indlela uKumkani abuprinta ngayo ubuntu bomntu ngamnye ophambili; Uya kuhamba ukuhleka ulile ngexeshana Ungathandabuzi ukuyithenga.
Uqweqwe oluqinileyo: Amaphepha ayi-624
umhleli: IPAZA NEJANES
Ushicilelo: 001 (Septemba 12, 2019)
Ungayithenga le ncwadi apha: Iziko
Iikhayithi esibhakabhakeni (Inoveli yemifanekiso)
Ukuvala, umsebenzi omnandi kunye noqwalaselo kaKhaled Hosseini uboniswa, umalunga noku Iikhayithi esibhakabhakeni. Le ncwadi isivulela indawo kubomi bemihla ngemihla yosapho olusondeleleneyo, kwaye isibonisa indlela ukhuphiswano lwekite oludumileyo olukhuphisana ngayo nomntakwabo uHassan, abantwana besi sibini kunye nabo bahlala bekhuselana.
Ngaphandle kokhuphiswano oluveliswe yinkwenkwe ukuphumelela umsitho, ukubaluleka kwamaqhina obuzali kunye nobunye bobutyebi obugqithisileyo anokuthi umntu abenabo buyatyhilwa: ubuhlobo.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-136
umhleli: I-PUBLICACIONES Y EDICIONES SALAMANDRA SA (Okthobha 28, 2011)
Ingqokelela: Inoveli yemizobo
Ungayithenga le ncwadi apha: Iikhayithi esibhakabhakeni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezi-6 zolutsha ezigqibeleleyo zokufunda ngentwasahlobo
Ingxaki yomzimba emithathu
Xa unika incwadi, awuyi kunika incwadi